Roa volana mifanesy … : miakatra hatrany ny vidin-tsolika | NewsMada
Roa volana mifanesy … : miakatra hatrany ny vidin-tsolika
Nanomboka ny volana oktobra, samy niakatra 20 Ar avokoa ny vidin-tsolika : 3.670 Ar ny lasantsy, 3.020 Ar ny gazoala, ary 2.200 Ar ny solika fandrehitra. Amin’izao fiandohan’ny novambra izao, mbola nanantombo 80 Ar avy izany, lasa 3.750 Ar ny lasantsy, 3.100 Ar ny gazoala, ary 2.280 AR ny solika fandrehitra. Mety mbola hitombo ihany izany amin’ny volana manaraka.
Iankinan-javatra maro ny vidin-tsolika ary antony maro ny mahatonga izany eto amintsika. Na efatra samihafa aza ireo kaompania mpivarotra, Total, Jovenna, Galana, Shell, tsy misy fahasamihafana ny vidiny ho an’ny mpanjifa. Roa volana mifanesy izao, miakatra indray io akora fototra iray io. Fanazavana nentin’ny OMH (Office malgache des hydrocarbures), ny hoe misokajy karazany maro ny hikajiana ny vidin’izany solika izany mialoha ny fitsinjarana azy mankany amin’ny mpanjifa. Ny vidiny avy any ivelany tonga eto an-toerana, manodidina ny 45 % ny salanisa ; saran’ny tahiry sy ny fitaterana, 11 % eo ho eo ; fitsinjarana azy ireny, 16 % ; hetra sy ireo karazana haba alain’ny fanjakana, 28 %.
Iombonana amin’ny rehetra maneran-tany kosa ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny vaovao navoakan’ny fikambanan’ny mpanondrana solika (Opep), nahomby ny fifampiraharahana nataon’izy ireo amin’ny fanjakana rosianina sy amerikanina, firenena roa lehibe tsy ao anatin’ny Opep, fa manana ny samy mpamokatra solika, manana tahiry azy manokana avy.
Nifampiresaka i Arabia Saodita sy i Rosia
Efa nanomboka ny faramparan’ny taona 2016, nifampiresaka amin’i Rosia i Arabia Saodita, lohany ao amin’ny Opep. Nifampidinihan’ny roa tonta tamin’izany ny hameran’ny firenena rosianina ny tahirin-tsolika avy ao aminy, ahafahana manjifa ny vokatra tavela avy amin’ny Opep. Mba hahazoana mampitombo ny vidin’ny baril izay fifanarahana eo amin’ny roa tonta izay hatrany amin’ny faran’ny taona 2018.
Tafakatra manodidina ny 60 dolara izao ny baril, nanomboka ny 27 oktobra teo, raha teo amin’ny 55 dolara nialoha izany. Marihina fa mbola tsy tonga eto amintsika, ankehitriny, ny fiantraikan’io 60 dolara io. Ny volana septambra 2017 eto an-toerana, nahitana vidin-tsolika farany ambany, 3.650 Ar ny lasantsy, 3.000 Ar ny gazoala, ary 2.180 Ar ny solika fandrehitra.